Soosaarayaasha iyo Alaab-keenayaasha Cudurrada faafa - Warshad Cudurrada faafa ee Shiinaha
HORDHAC HSV waa baqshad, fayraska DNA-ka keena oo qaab ahaan u eg xubnaha kale ee hiddo-wadaha Herpesviridae. Laba nooc oo hidde ahaan u kala duwan ayaa la aqoonsan yahay, loo qoondeeyay nooca 1 iyo nooca 2. , maqaarka, isha iyo xubinta taranka, Infekshannada habka dhexe ee neerfaha (meningoencephalitis) iyo infekshan guud oo guud oo kudhaca dhallaanka bukaanka difaaca jirka ayaa sidoo kale la arkaa, inkasta oo mo ...
Imtixaanka degdegga ah ee 'StrongStep® Neisseria gonorrhoeae Antigen' waa tallaal degdeg ah oo socod-socod ah oo loogu talagalay ogaanshaha soo-saarista tayada leh ee Neisseria gonorrhoeae antigen ee kaadi mareenka ragga iyo xubinta taranka dumarka. Faa'iidooyinka Xaqiijinta dareenka sare (97.5%) iyo qeexitaan sare (97.4%) marka loo eego natiijooyinka 1086 xaaladood oo tijaabooyin caafimaad ah. Deg Deg Kaliya 15 daqiiqo ayaa loo baahan yahay. Nidaam hal-tallaabo oo si fudud loogu adeegsado in si toos ah loogu ogaado antigen-ka. Qalab la'aan Cusbitaalada ama rugta caafimaad ee xaddidan isha ...
Tijaabinta Baaritaanka Kansarka Kahor Ilmo-galeenka iyo Kansarka
ISTICMAAL ISTICMAAL AH StrongStep® HPV 16/18 Qalabka Tijaabada Degdega ah ee 'Antigen Rapid Test' waa tallaal difaac oo deg deg ah oo lagu ogaanayo soo-saarista qiyaasta tayada leh ee HPV 16/18 E6 & E7 oncoproteins-ka ee shaybaarka xubinta taranka dumarka. Qalabkan waxaa loogu talagalay in loogu isticmaalo kaalin ahaan baaritaanka cudurka Kansarka afka ilmo-galeenka iyo Kansarka. Hordhac Dalalka soo koraya, kansarka xubinta taranka dumarka ayaa ah sababta ugu weyn ee keenta dhimashada kansarka ee la xidhiidha haweenka, sababtoo ah fulin la'aanta baadhitaanada baadhitaanka kansarka ku dhaca makaanka ka hor iyo ca ...
ISTICMAALKA UGU TALAGALKA Badan 'Qalabka Loogu Talo Galay' StrongStep® Strep A Rapid Test Device 'waa tallaal deg deg ah oo loogu talagalay ogaanshaha tayada ee kooxda A Streptococcal (Group A Strep) antigen laga soo qaado tijaabooyinka tijaabada qoorta ee loo yaqaan' A 'Strep pharyngitis ama xaqiijinta dhaqanka. Hordhac Beta-haemolytic Group B Streptococcus waa sababaha ugu weyn ee infekshannada neef mareenka ee sare ku dhaca aadanaha. Cudurka ugu badan ee dhaca kooxda A ee Streptococcal waa pharyngitis. Calaamadaha lagu garto tan, haddii aan laga been sheegin ...
StrongStep® Strep B antigen Rapid Test waa tallaal difaac oo deg deg ah oo muuqaal ah oo lagu ogaanayo soo-saarista tayada leh ee Kooxda B Streptococcal antigen ee ku jirta suufka xubinta taranka dumarka Faa'iidooyinka Degdega ah Wax ka yar 20 daqiiqo ayaa loogu baahan yahay natiijooyinka. Ku Fashilma Xakamaynta xubinta taranka haweenka iyo makaanka afkiisa labaduba waa caadi. Dabacsanaanta Looma baahna qalab gaar ah. Kaydinta Noocyada Heerkulka Kaydinta Neefsashada 87.3% Gaar ahaanta 99.4% Saxnaanshaha 97.5% CE Calaamadeysan Qalabka Cabbirka = 20 xirmooyinka Faylka: Buugaagta / MSDS ...
ISTICMAALKA ISTICMAALKA StrongStep® Trichomonas Vaginalis Antigen Rapid Test waxaa loogu talagalay ogaanshaha tayada ee daawooyinka antigens ee Trichomonas (* Trichomonasw) oo ka yimaada suufka xubinta taranka haweenka Qalabkan waxaa loogu talagalay in loo adeegsado gargaar baarista cudurka Trichomonas. Hordhac Caabuqa Trichomonas wuxuu mas'uul ka yahay cudurka ugu badan, ee aan ku faafin fayraska galmada (vaginitis ama trichomoniasis) adduunka oo dhan. Trichomoniasis waa sababaha ugu weyn ee cudurada dhamaan bukaanada cudurka qaba ...
Trichomonas siilka & Candida
Imtixaanka degdegga ah ee loo yaqaan 'StrongStep® StrongStep® Trichomonas / Candida Combo' waa Combo waa tallaal degdeg ah oo dhinaca dambe ah oo loogu talagalay ogaanshaha qiyaasta tayada ee trichomonas vaginalis / candida albicans antigens oo ka soo baxa xubinta taranka haweenka. Faa'iidooyinka Degdega ah Kaliya 10 daqiiqo ayaa loo baahan yahay. Badbaadso waqtiga iyo kharashka Hal baaritaan oo loogu talagalay laba cudur oo leh hal mariin. Ogaanshaha isku mar Kala sooc labada cudurro si gaar ah. Isticmaalaha u fudud-fudud Si fudud ayaa loo fasiray loona turjumay dhammaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka. Kaydinta heerkulka qolka Specif ...
Qalabka Imtixaanka Igm / Iggrapid, Vibrio Cholerae O1 / O139 Antigen Combo Tijaabada Degdega ah, H. Pylori Ag Imtixaanka Degdega Ah Wuxuu Ogaadaa Antigen, Qalabka Coronavirus Antigen Test, Coronavirus ee Tijaabada Covid-19, Novel Coronavirus Degdega ah Ket Test,